ubulungu: uMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-12 March 2019	• 6 Amazwana
Kuyisikhathi esithakazelisayo, ngoba ukumelana nomsebenzi wami wokubhala wokuzimela ubamba kakhulu. Lokhu kusho ukuthi ukucutshungulwa kwe-Facebook kukhulu kangangokuthi inani lezivakashi ukuthi i-Facebook ivakashela iwebhusayithi yami iwile kakhulu. Lokhu kubonakala kusuka kuzibalo. Ngisho noma ngabe imilayezo yabelwe izikhathi ezingamakhulu, kuthatha [...]
Umkhankaso wesayithi weLungu lokugcinwa kwewebhusayithi kaMartin Vrijland
ahanjiswe UMARTIN VRIJLAND	by UMartin Vrijland	ngo-1 Julayi 2016	• 4 Amazwana
Iminye imithombo ingaphansi kwengcindezi enzima. Amawebhusayithi amaningi alawulwa yi-state futhi kumele ahlangane ne-dis-info ngokuhlaziywa okuhle, ukuqinisekisa ukuthi 'ukucabanga okucabangelayo' kungabanjelwa esimweni sokuzilibazisa ngamaqembu abanobudlova nabantu abangenanto engcono yokuyenza. Ngokugcwalisa i-intanethi ngalokhu [...]
Ukuvakashelwa okuphelele: 67.734
SandinG op Amabhomu aseRussia abhubhisa izimoto zaseTurkey ezihlome ngezikhali eSyria, isimo salola kakhulu
Jan Holland op Amabhomu aseRussia abhubhisa izimoto zaseTurkey ezihlome ngezikhali eSyria, isimo salola kakhulu